10 Best Skills for Employees ﻿
10 Best Skills for Employees
Tags: 10 Skills-employees-competencies-jobsinyangon
၁။ Communication ( Written and Verbal)
ကျမတို့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဆက်သွယ်တဲ့အခါ Professional ကျကျ ပြောဖို့လည်းမလိုသလို စာအုပ်တစ်အုပ်လိုရေးပြီး ဆက်သွယ်စရာလည်း မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လုပ်ငန်းခွင်မှာ အဆင်ပြေပြေလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြတ်ပြတ်သားသား ဆက်သွယ်ပြီး တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးနားလည်အောင်ပြောဆို၍သောလည်းကောင်း စာရေးသားခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်သင့်ပါသည်
၂။ Computing Skill ကောင်းမွန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင့်။
အခုဆိုအရမ်းကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အစစအရာရာ computer ကို အသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အလုပ်လျှောက်ဖို့ CV တင်ရင်တောင် Online ကနေ တင်လာကြတယ်။ Buiness ပိုင်းဆိုင်ရာ Presentation လုပ်တဲ့အခါ၊ Accounting ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိုလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ email ပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ် computer ကို အသုံးပြုပြီး လုပ်ကိုင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကလည်းလိုအပ်ပါတယ်ရှင်။
၃။. Customer Service အခုအလုပ်တော်တော်များများမှာဆို Customer Service ကို ဦးစားပေးလာကြတယ်။
လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာဆို Customer Service ကောင်းဖို့ကအရမ်းကိုအရေးကြီးတယ်။ Customer Service ရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်ခြင်းက မရှိမဖြစ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် Clients တွေကို နှုတ်ဆက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Customer inquires ကို ဖြေတာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ပြုလုပ်တဲ့အခါမှ Customer Service ကို ကောင်းကောင်းပေးဖို့က အရမ်းကို အရေးကြီးလို့ Customer Service ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုက လည်းလိုအပ်ပါတယ်။
၄. Empathy ဖြစ်တဲ့ နားလည်မှုရှိဖို့လိုတယ်။
Empathy က sympathy တော့မဟုတ်ဘူး။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်နားလည်မှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ Empathy က သင်ယူဖို့တော့ ခက်တယ်။ဒါပေမယ် အဲ့ဒါက customer service , effective communication နှင့် teamwork အတွက် အရမ်းကို အရေးကြီးလို့ ဒီစွမ်းရည်ကလည်းရှိသင့်ပါတယ်။
၅။ Learning ဆိုတဲ့ သင်ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်ရှိ ဝန်ထမ်းများဟာ သင်ယူစရာအားလုံးကို သင်ယူသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်က sales ဆိုပြီး sales တစ်ခုတည်းကိုသာ တော်နေယုံမဟုတ်ဘဲ လုပ်ဝန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သင်ယူစရာများ management ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ယူစရာများကို သင်ယူသင့်ကြောင်းပြောပြလိုပါတယ်။
၆.Math : သင်္ချာဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်မှာ statistic ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ sales volume တွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ပိုက်ဆံကို ရေတွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် သင်္ချာကအရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်။ အဲ့ဒါမို့ အခြေခဲသင်္ချာကို တော့ကောင်းကောင်းသိအောင်လုပ်ထားသင့်ပါတယ်
၇. Organization နဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်။
Organization ဖြစ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ တိတိကျလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် multi task ကို လုပ်ကျရတယ်။ အဲ့ဒီအခါ အရာအားလုံးကို မမေ့အောင် list လုပ်တာတို့၊ cleander နှင့်လုပ်တာတို့ကို ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ အဲ့ဒါမို့ Organization နှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကလည်း အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်။
၈။ Problem Solving ဖြစ်တဲ့ ပြသနာကို ဖြေရှင်းနိုင်သည့် စွမ်းရည်ကလည်း အရမ်းကိုအရေးကြီးပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပြသနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါ စဉ်းစားချင့်ချိန်တွေးတောပြီး ပြသနာကို အေးအေးဆေးဖြေရှင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကလည်း အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်
၉။ Research and Information Gathering ဖြစ်တဲ့ သတင်းစုဆောင်ရှာဖွေတာကလည်း အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်။
မိမိနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကို research လုပ်ပြီး စုဆောင်တာက ကိုယ့်လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက် အရမ်းကို အသုံးဝင်တဲ့အတွက် ရှိသင့်တဲ့ စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်။
၁၀။ Teamwork ပါ။ ကျမတို့က အလုပ်အောင်မြင်ဖို့ တစ်ယောက်ထဲလုပ်လို့မရပါဘူး။
Team work နဲ့လုပ်မှ အောင်မြင်မှုကို ရရှိမှာဖြစ်လို့ Teamwork ကလည်း အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်လို့ သိထားသမျှကို ဝေမျှရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါသည်။
JobsInYangon ရဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း skill ၁၀ မျိုးနျှင့် ပြည့်စုံပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။